Iwo Akanakisa Graphical GUI Vatengi eGit Linux Vakapindwa muropa
Kudzora system Git, yakagadzirwa naLinus Torvalds, ndeimwe yeakanakisa vhezheni yekudzora software. Iyo yakavhurwa sosi uye mamwe makuru mapurojekiti akatogadzirwa akapoterera, senge GitHub kana Gitlab. Asi pamwe kushanda pane yekuraira tambo hakusi kune wese munhu anofarira, uye ndosaka ndiri kuenda kuzokupa iwe akanakisa graphic vatengi kuitira kuti iwe ugone kubata mapurojekiti mune yakawanda yakajeka, inoonekwa uye inonzwisisika nzira.
Iwe unofanirwa kuziva kuti zviripo akawanda GUI vatengi izvo zvinogona kukurumidzisa basa rako neGit. Dzimwe dzadzo dzakasununguka zvachose, yakavhurwa sosi uye muchinjiko-chikuva, kunyangwe paine zvekare akabhadharwa, kunyange zvisingawanzo kudhura zvakanyanya. Ini ndichaedza kugadzira rondedzero ine mhando dzese dzemahara uye ndoderedza kusvika kune yepamusoro iyo inobhadharwa. Iwe unoda kuziva kuti ndeapi akanakisa? Ramba uchiverenga…
ari akanakisa graphical Git vatengi Ndizvo:
GitKraken: cross-platform, yakashongedzwa uye inoshanda kwazvo mutengi weGit paLinux. Inotsigira akawanda profiles, kamwe-tinya mabasa, nekukurumidza uye nzwisisa.
Git-mutsara: kuseri kwezita iri risingazivikanwe kunovanza yakasimba kwazvo, inogadziriswa yeGit mutengi uye ini ndinonyora muPython pasi pechirevo cheGPL. Iyo ine inonakidza keyboard mapfupi, marongero emitauro, nezvimwe.
SmartClient: ndeimwe yeakanakisa graphical vatengi veGit. Multiplatform, ine simba uye inozivikanwa kwazvo. Runako rwakanaka kune nyanzvi. Iyo zvakare inotsigira SVN repos.
Svetuka: ndeye yemahara GTK + yakavakirwa GUI mutengi weGit iyo inogona kumhanya paLinux. Yakagadziriswa semhedzisiro yehackathon muna 2007. Ikozvino yakabatanidzwa pasi peiyo GNOME zvivakwa.
Gitg: imwe GUI kumberi-kumagumo kweGNOME Git. Kunyangwe ichisanganisika zvakakwana nenzvimbo dzeGNOME, inogona kuiswa pane mamwe desktops.
Git GUI: multiplatform, inotakurika uye yakavakirwa paTcl / Tk. Uku kumberi-kumagumo kweGit kunogona kushanda chaizvo paLinux. Ichi ndicho chishandiso chavanoshandisa pa kernel.org.
Qgit: yakapusa kwazvo, nekukurumidza uye nesimba guru. Iyo GUI mutengi weGit yakanyorwa muQt uye C ++. Iyo inopa inonakidza UI uye inokutendera iwe kutarisa zvinyorwa, nhoroondo, tarisa chigamba zvemukati, chinja mafaera, nezvimwe.
GitForce: zvirinyore kushandisa, intuitive GUI yeGit. Inoshanda paLinux, Windows uye chero sisitimu yekushandisa ine Mono rutsigiro. Iyo ine simba uye yakafanana neiyo minimalist Qgit interface mune dzimwe nzira ...
Egit: Haisi chirongwa pachayo, asi plugin yeiyo Eclipse IDE. Saka kana iwe ukashanda pamwe neiyi nharaunda yekusimudzira, zvingangoita kuti zvichabatsira zvikuru kuiisa pamwe nehurongwa.
GitEye: yakapusa uye inonzwisisika GUI yeGit iyo inosanganisa zviri nyore zvese zvaunoda pamapurojekiti ako.
GITK: Generalized Interface Toolkit ndeye multilayer kumberi-kumagumo kweGit iyo inoshanda nemazvo, inogadziriswa uye inoshanda.
Yakadzama Unganidza: Inoenderana neLinux, pamwe neWindows neMac.Iyo ndeimwe yeanonyanya kushandiswa uye anodiwa, asi kuti uwane rezinesi rekushandisa-refu uchafanira kubhadhara madhora makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe.
Aurees Git Mutengi: zvakare multiplatform, asi mahara. Iwe unogona kutaridzika kushanda pamwe nezvakachengetwa uye zviri nyore uye zvine simba mukutarisira mapurojekiti ako.
GitBlade: iwe unogona kubhadhara inenge $ 19.99 pagore uye mushandisi. Iri muchinjika-chikuva uye rinokwanisa kupa vashandisi maficha avanotsvaga kuti vashande nemapurojekiti avo eGit, kusanganisira chishandiso chekubatanidza, graphical maneja wematavi, kugona kuona akawanda mafaera panguva imwe chete, maturusi enhoroondo, kutsanangura, nezvimwe. .
Zviripachena, iwo mubvunzo we edza uye sarudza ndeipi inonyanya kukodzera zvaunoda kana zvaunofarira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Iwo akanakisa graphical GUI vatengi veGit
David dominguez akadaro
Yakanaka POST, kusvika parizvino ini ndangoshandisa iyo terminal, ndichaedza imwe uye ini ndichataura
Pindura kuna David Dominguez
git-hub desktop inowanikwa zvisiri pamutemo. ye linux